Fan Fan Qaboojiyaha Fan Taageere qaboojiye taageere matoorrada korontada
Qaboojinta Fanka Matoorka
Waxaan nahay soo saaraha qaboojinta marawaxada
Koronto dhaliyaha ayaa dhaliya kulayl badan marka uu wareego si uu koronto u dhaliyo, hawo qabowna waa in ay dhex martaa istaatarka iyo rotor-ka. Sidaa darteed, waxaa jiri doona marawaxadaha hal daraf ee matooriyaha. Marawaxada xawaaraha sare leh waa in ay damiyaan hawada qaboojinta, waana in ay jiraan qaar ka baxsan shabag u eg shabagga (inta badana ku xidhan goobabada) waa muraayada koronto-dhaliyaha, kaas oo ka ilaalinaya marawaxada si ay uga hortagto in walxuhu ku dhacaan marawaxadaha. .
Daboolka marawaxada baabuurta iyo daboolida marawaxada dhaliyaha waxa si wada jir ah loogu tilmaamaa daboolida marawaxada matoorka. Waxaa jira laba hawlood: 1. Heerka ilaalinta IP-ga, sida IP54, lambarka koowaad waa in laga ilaaliyo adkaha ku dhex milma kiiska iyo in laga ilaaliyo dadka inay taabtaan qaybaha khatarta ah ee kiiska. Muraayaddu waa inay ka ilaaliso walxaha shisheeye inay taabtaan marawaxada. Tirada labaad waxay u taagan tahay awoodda ilaalinta dareeraha. 2. Xakamee marinka hawada. Sababtoo ah marawaxadu is-qaboojiso, haddii uu jiro muraayad, muraayadda ayaa lagu afuufi doonaa dhammaadka D iyada oo la raacayo farqiga (qaybinta wareegga) ee u dhexeeya muraayadda iyo kulaylka, taas oo ka qaadaysa kulaylka weelka kulaylka. Haddii aysan jirin muraayadda hore, dabaysha marawaxadu ma laha jihada, iyo saamaynta kulaylka ayaa aad u liidata.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa mudan in la doorto na!
Waxaan nahay shirkad soo saarta marawaxada qaboojinta alaabada taxanaha ah. Sannado badan oo horumarineed ka dib, shirkaddu waxay ku guulaysatay kalsoonida macaamiil badan oo waaweyn iyada oo loo marayo alaab tayo sare leh iyo adeegyo aad u fiican. Sannado badan oo waayo-aragnimo wax-soo-saar ah ayaa ku siinaysa alaab wanaagsan.
Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay had iyo jeer u hoggaansamaan mabda'a maaraynta hibada-ujeedka ah, waxay soo ururisay aqoonyahannada warshadaha, isku darka tignoolajiyada macluumaadka ajnabiga ah ee horumarsan, hababka maaraynta, iyo hawlaha shirkadaha oo leh xaqiiqda gaarka ah ee shirkadaha gudaha si ay u siiyaan shirkadaha xalal buuxa.